Ebumnuche dị iche iche na-ekpo ọkụ China Emeputa
Nkọwa:Chaja chara dị mfe,Ngwakọta Batrị dị iche iche,Soja chaja Ngwa
Chaja chara dị mfe,Ngwakọta Batrị dị iche iche,Soja chaja Ngwa
Home > Ngwaahịa > Ike Ike Ike > Chaja chara dị mfe > Ebumnuche dị iche iche na-ekpo ọkụ
Ike anyanwụ dị ike ma nwee ume ọhụrụ. Ọ bara ọgaranya akụ na ụba, enweghị onwe ya iji, na-enweghị njem, na-enweghị mmetọ ọ bụla na gburugburu ebe obibi. O meela ka mmadu di ndu ohuru ohuru, wee webata ndi mmadu na umu mmadu n'oge oge iziputa ume na ikpochapu mmetọ.
Ngwaahịa a bụ ụda chaja anyanwụ dị iche iche nke na - agbanwe agbanwe ugbu a, nke a na - akpọ Charger Solar. Ọrụ ndị bụ isi: ike anyanwụ na - echekwa usoro nchekwa, ike mkpanaka, ọrụ SOS na ọrụ ntanetị. Ọ na-eji batrị batrịum dị elu dị ka batrị batrị iji kwụọ ekwentị ahụ mgbe ị na-enweta ìhè anyanwụ, ma nwee Batrị Batrị ọtụtụ na- enye ike iji okpukpu ọkụ dị n'otu n'otu oge ahụ. Ngwaahịa n'onwe ya nwere ike ibu ebubo ozugbo site na nkwụnye ọkụ ọkụ, ma ọ bụ enwere ike ịgba gị akwụkwọ site na ike anyanwụ na-akwụ ụgwọ, nke dị mfe iji. Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ndị enyi gị nwere mmasị n'egwuregwu ebe ọ bụla iji dozie nsogbu ahụ na ngwaọrụ enweghị ọkụ eletrik n'oge ọ bụla.
O jiri akwa bathium-ion batrị dị elu dị ka ọnụọgụ nchekwa, nke nwere ike ijikwa ekwentị mgbe ị na-enweta ìhè anyanwụ, n'otu oge ahụ, nwere anyanwụ chaja ngwa ngwa
Iji ya mee ihe: jiri nwayọọ nwayọọ wepụsịa oghere ndị dị na mbara igwe ma tinye ha na ìhè anyanwụ ka ha kwụọ ụgwọ nchekwa ike nke ngwaahịa ahụ ma ọ bụ jiri eriri ntanetị iji kwado ngwaahịa ahụ na ac. Mgbe ị na-ejighị ya, jiri aka na-atụgharị ma na-agbaghasị oghere ndị dị na mbara igwe ruo mgbe ha mechiri kpamkpam. Enwere ike ịjụọ ekwentị mkpanaaka na akara ntanye ya.